ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာကလူးဂါများ | တိုယိုတာကလူးဂါကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Off-Road Vehicle / Suv (127)
A/C: Front (40)
Black Toyota Kluger 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Toyota Kluger 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 455 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Kluger 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Grey Toyota Kluger 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Toyota Kluger 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်...
Lks 293 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Kluger 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Silver Toyota Kluger 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Kluger 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 388 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Kluger 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Black Toyota Kluger 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ...
Grey Toyota Kluger 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Black Toyota Kluger 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Black Toyota Kluger 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 338 ညှိနှိုင်း
Lks 328 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Kluger 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 333 ညှိနှိုင်း
Red Toyota Kluger 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Grey Toyota Kluger 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Gold Toyota Kluger 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
မြန်မာ ပြည်တွင်းက အသေးစား အိမ်စီး အက်စ်ယူဗီ ကလူးဂါများ
ပြည်တွင်းမှာ တိုယိုတာ ကလူးဂါကားများဟာ တိုယိုတာ ဟိုက်လပ်စ်ဖ် တို့ထက် ပုံစံ ဒီဇိုင်း လှပပြီး လှပမူ တို့ကြောင့် လူစီးများပါတယ်။ ဈေးကလည်း တိုယိုတာ လန်ခရုဇာ တို့ထက် သက်သာတာမို့ အိမ်စီးကားေ၇ွးချယ် ၀ယ်ယူလိုသူများ အဖို့ ၀ယ်ယူချင်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အစီးများ ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ငွေကြေးတတ်နိင်သူတွေရဲ့ ၀ယ်ယူစီးနင်းမူ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်းတွေမှာ တော့ တော်တော် များ များ တွေ့မြင်နိင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ဂျပန်လေလံကနေ မှာယူ စီးနိင်ကြသလို၊ တစ်ချို့သက်သက်ကို လေလံက ကားကောင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်မှာယူ ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ပြန်လည် ရောင်းချနေတာ လည်း ရှိပါတယ်။
ကလူးဂါတွေဟာ အသေးစား မိသားစု စီးကားတွေ ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာ ကနေထုတ်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။တိုယိုတာ ကန်မရီးအပေါ်မှ မူတည်ပြီး ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ စပြီး ကြော်ငြာခဲ့ပြီး တိုယိုတာ ဟိုက်လန်ဒါကားတွေလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အက်စ်ယူဗီလိုင်းမှာ အခြေတည်ထားတဲ့ ပထမဦးဆုံးကား တစ်စီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း တိုယိုတာ Rav-4 မတိုင်ခင် အရောင်းအသွက်ဆုံး အက်စ်ယူဗီ ကားတစ်စီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မြို့တွင်းမှာ စီးနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် အသုံးပြုမည် သူများ အတွက် ကလူးဂါဟာ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဂီယာကလည်း အော်တိုသာ လာပါတယ်။ ဘီးမောင်းနင်းမူမှာ နှစ်ဘီးမောင်းဖြစ်တဲ့ ကလူးဂါတွေ ရှိသလို လေးဘီးမောင်း စနစ် ဖြစ်တဲ့ ကလူးဂါတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အလတ်စား SUV ကား တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကလူးဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိင်ငံခြားမှာတော့ ဟိုက်လန်ဒါ လိုလည်း သိကြပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နောက်ကမှ ဂျပန် ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်လို့ အခြား ကားတွေထက် စာလျှင် တစ်ပတ်ရစ်တွေမှာတောင် အသစ်နီးနီး အရည်အသွေး ရှိနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ RAV -4 မတိုင်ခင်မှာတော့ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကာ ဟိုက်လတ် စပ်ဖ်တို့နဲ့ ပြိုင်ဖက် အရည်အသွေးတူ တွေပါပဲ။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ စပြီး ၂၀၀၇ လောက်ထိ မော်ဒယ်ကား တွေကို စပြီးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလူးဂါထဲမှာမှ ဗီ ဂရိတ်၊ ဂျီ ဂရိတ်၊ အဲလ် ဂရတ် စတဲ့ ကား အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ အမျိုးအစားတွေ ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ ဒီဇယ် မလာပါဘူး။ ဓာတ်ဆီထဲမှာမှ ၂.၄ လီတာ၊ ၃.၀ လီတာ၊ ၃.၃ လီတာ စသည့်ဖြင့် ရှိပါတယ်။ ဂီယာကလည်း အော်တိုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလူးဂါက ဟိုင်းဘရစ်ကားတွေလည်း ထွက်ပါတယ်။ အစကတော့ မထုတ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်. ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အတွင်းမှာပါ။ ကားဂရိတ် ပေါ်မူတည်ပြီး တီဗီ၊ အနောက် ကင်မရာ၊ အလွိုင်းဝှီး စသည့်ဖြင့် ပါရှိမူတွေ ကွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလူးဂါ တွေဟာ မောင်းနှင်ရာတာ ချောမွတ်ပြီး စီယာတိုင် ကိုင်တွယ်မှုတွေမှာ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာ အခြား ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ကားတွေထက်လည်း များစွာ ပေါ့ပါးလှတဲ့ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ကလူးဂါ မော်ဒယ်တွေမှာ ဆလင်ဒါ လေးလုံးပါဝင်ပြီး V6 အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ ဌင်းရဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာ V6 အင်ဂျင်ဟာ စွမ်းအား အပြည့်အ၀ စွာ ဖြစ်တယ်လို့ ရီဗျူးဝါးတွေက ပြောပါတယ်။ ၂၀၀၈ ကလူးဂါတွေမှာတော့ တူညီစွာ စံနှုန်းတစ်ခု အနေနဲ့ ၃၅၀၀ စီစီ၊ ဆလင်ဒါ ၄လုံး ၊ V6 အင်ဂျင်တွေကို တွေ့၇မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၇ ဖြစ်တဲ့ ကလူးဂါ ဟိုက်ဘရစ်တွေမှာ ဒီဇိုင်း အပိုင်း အနနဲ့ ဌင်းမှာလည်း အားလုံးသော ကလူးဂါတွေပေါ်မှာ တူညီစွာ အခြေခံထားပါတယ်။ အတွင်းဖက် ဒီဇိုင်း အနေနဲ့ အရှေ့ဖက် သံဇကာနဲ့ ဘန်ဘားများ ပေါင်းထည့်ခြင်း၊ မီးလုံးမီးများ အရောင် ပါဝင်လာခြင်း၊ LED နောက်ဖက်မီးများ ပါရှိလာခြင်း၊ စသည့်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ LED မီးတွေကိုတော့ ဒီကနေ့တွေမှာ များစွာ ခေတ်စားနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ဟိုက် ဘရစ်ဗားရှင်းတွေမှာ ဘီးလက်မအာဖြင့်ကတော့ ၁၇ လက်မ ပါရှိပါတယ်. စပုတ်တံက ၅ ချောင်းပါဝင်ပြီး အလိုင်းဝှီးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲယားကွန်းကို ရှေ့နောက် ပါဝင်ခြင်း၊ လေအိတ်၊ (ခရီးသည်၊ ဒရိုင်ဘာ) ၊ ပါဝါ၀င်းဒိုး၊ ရေဒီယို၊ တီဗီနဲ့ အခြား ပရီမီယံ အသံ စနစ်တွေပါ ပါဝင် ပြီး အစိတ်အပိုင်းများ စုံပြီး ဒီဇိုင်းလှပတဲ့ အတွက် ကလူးဂါကို အ၀ယ်များပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပုံစံတွေလည်း ဆန်းသစ်ပြီး နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်တွေမှာ ပုံစံ တော်တော်ကြီးကို ကွဲသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မားကတ် ဈေးနှုန်းနဲ့ ရရှိနိုင်မှု
အဖြူရောင်နဲ့ အနက်ရောင်မှာ အနက်တွေက ပိုဈေးကောင်းပါတယ်။ ၂၀၀၁ မှတင်ပဲ ဈေးတော်တော်ဟပြီး သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ကျပ် သိန်း (၁၀၀) ကနေ ၂၀၀ ကျော်ထိ ပေါက် ဈေး အချို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။ တစ်ချို့မော်ဒယ်တွေမှာ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ လောက်ထိ ပေါက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း ရိူးရွန်တွေက တစ်ဆင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်စီးကား တစ်ဖြစ်လည်း အင်ဂျင် ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ဖြင့် အသေးစား ဒီဇိုင်း လှလှ အက်စ်ယူဗီ အသေးစား စီးနင်းလိုသူများ အတွက် ကလူးဂါဟာ အသင့် ရှိနေပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု တစ်ခုကို ပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။